मसँग सामाजिक मिडिया दोषी छ Martech Zone
सोमवार, जुलाई 18, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म दोषी छु। होईन - यो दोषी छैन कि मैले आफ्नो फोटो लिनुको सट्टा स्टक फोटोमा केही पैसा खर्च गर्नु पर्छ। यो अपराध हो कि म मेरो सामाजिक नेटवर्क मा भाग लिएको छैन।
गुगल सहयोग गरेको छैन अब यस्तो देखिन्छ कि मैले univers ब्रह्माण्डहरूमा four ओएल ... मेरो ब्लगको सट्टा कुराकानी गर्नुपर्नेछ। फेसबुक, LinkedIn र twitter। मैले भर्खर स्पोटिफको लागि साइन अप गरें ... र मैले सुनें कि पाण्डोराले चाँडै नै एक सामाजिक नेटवर्क सुरू गर्दैछ। म यसको लागी एक सामाजिक नेटवर्क पनि प्रबन्ध गर्छु नौसेना भेट्स.
पछिल्लो केहि हप्ता कामको टन र बिरामी परेको संयोजनले मलाई दोषी महसुस गरें ... म तपाईंसँग कुरा गरिरहेको छैन। म तिमीसँग सम्पर्कमा छुइन। मँ मेरो चासो राख्न म मेरो पक्ष गरीरहेको छैन। ओह पक्का ... मैले एउटा क्र्यापलोड बाहिर फालें अनौपचारिक तपाइँलाई रुचि राख्न ... र केहि योग्य लिंकहरू यहाँ र त्यहाँ टिप्पणी गर्न। तर मलाई थाहा छ म तपाईंलाई राख्न पर्याप्त छैन।
यो दोषी मलाई मार्दैछ।
म वास्तवमा ठट्टा गर्दैछु। म तपाईंलाई जान्न चाहन्छु किनकि तपाईं सायद उही चीजबाट गुज्रिरहनुभएको छ। म मान्छेहरु सबै समय मलाई सोध्नुहोस्, "तपाइँ कसरी समय फेला पार्नुहुन्छ?"। यो सजिलो छैन। वास्तवमा - बिरामी हुनु, विदेश जाने, घर सर्ने, बुबा बन्ने, सार्वजनिक बोल्ने, रेडियो कार्यक्रम चलाउने, विकास गर्ने, बिक्री कलमा जाँदा, प्रकाशनहरूको लागि लेख्ने र वास्तवमा हामी ग्राहकहरूसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने… राख्दै छैन। भलाइ धन्यवाद, मसँग मेरा सहकर्मीहरू, साथीहरू र बुझ्ने ग्राहकहरू र सम्भावनाहरू छन् जसले मलाई राखिरहेका छन्।
त्यसोभए सबैभन्दा पहिले कुरा भनेको रणनीति नै थियो जसले मलाई जहाँ म ल्यायो… मेरो सामाजिक उपस्थिति। समयको लागि, मलाई थाहा छ म एक सानो हिट लिन सक्छु र म फिर्ता बाउन्स गर्नेछु। तर यदि म यस गति को हानि को लागी जारी राख्छु, यसले मैले गरेको प्रत्येक चीजमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। म अझ राम्रो गर्छु। म वाचा गर्छु। मलाई अझै नत्याग्नुहोस् - तपाईंले हालसालै मेरो सबैभन्दा राम्रो देख्नु भएको छैन र म तपाईंलाई विश्वस्त गराउन सक्छु कि केहि महान चीजहरू चाँडै आउँदैछन्! वरिपरि छडी।
फेरि फेरी ... फोटोको बारेमा माफ गर्नुहोस्। मसँग स्टक फोटो साइटहरू मार्फत रमिंग गर्न समय थिएन। यो १०::10० अपराह्न हो। म अब घर जाँदैछु।
टैग: गतिदबाबसामाजिक मिडिया दोष
मलाई तपाईको लागि नराम्रो लाग्यो त्यसैले मैले तपाईको तस्वीर डाउनलोड गरें र त्यसपछि iStockPhoto मा अपलोड गरें। त्यसैले अब यो * एक स्टक फोटो हो! (पक्कै पनि मजाक गर्दै)
आराम गर्नुहोस्, आफ्नो सास समात्नुहोस्। बच्चाहरूलाई अँगालो हाल्नुहोस्, पत्नीलाई चुम्बन गर्नुहोस्, नयाँ खन्नेहरूलाई लामो हेर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण कुराहरू भोलि पनि यहाँ हुनेछन्।